केशव स्थापित भन्छन -‘ए होर ! मलाई मन्त्रीबाट हटाएको थाहै छैन !’::Hamrodamak.com
केशव स्थापित भन्छन -‘ए होर ! मलाई मन्त्रीबाट हटाएको थाहै छैन !’
काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर ३ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री केशव स्थापितले आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएकोबारे जानकारी नरहेको बताएका छन् ।
मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पदबाट बर्खास्त गरेको बारे स्थापितले भने-‘ए होर ! मलाई त यसबारेमा केही थाहा छैन, म बुझेर खबर गरौँला ।’
बुधबार बसेको प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि गाली गरेको आरोप लागको थियो । त्यसपछि मूख्यमन्त्री पौडेल स्थापितलाई मन्त्रीबाट हटाउन नेकपा नेतृत्वसँग छलफलका लागि बिहीबार काठमाडौँ आएका थिए ।